Zavakanto fanaovana makiazy
Inona no borosy fanadiovana tarehy silicone tsara indrindra?
Borosy fanadiovana tarehy silicone vita amin'ny akora silikôna vita amin'ny sakafo ho an'ny fanadiovana sy fanorana
"Ergonomics" famolavolana.Mora ny fikarakarana, mifanaraka amin'ny contours amin'ny tarehy.
Teknolojia Sonic: 6 ambaratonga ny hamafin'ny.
Ny silicone vita amin'ny sakafo dia tena malefaka ary azo antoka ampiasaina.
Inona no atao hoe borosy fanadiovana silicone?
Ny borosy fanadiovana silicone dia fitaovana entina hanadiovana ny tarehy.Matetika izy io dia ampiasain'ny bateria azo averina ary manetsika ny volony mba hanesorana ny loto sy ny menaka ao anaty lavaka lalina.
Ny tombony amin'ny borosy fanadiovana silicone
Nampidirina ho fitaovana mahery vaika hanatsarana ny fanaonao fanadiovana, ny borosy fanadiovana tarehy dia azo "ampiasaina mba hanesorana ny soritra farany amin'ny makiazy, menaka ary potipoti-javatra amin'ny hoditra. sebum be loatra izay mahatonga ny fiparitahan'ny mony. Mila misafidy ny mpanadio tsara sy ny mpanadio tsara ianao. Ny zavatra masiaka loatra dia mety hampitombo ny akne. Andramo tsimoramora ny fampiasana ny borosy in-2-4 isan-kerinandro ary jereo raha miharatsy ny aknenao. miverina na miala sasatra.
Ny borosy fanadiovana tarehy silicone ve dia madio?
Ny borosy fanadiovana silikôla no borosy madio indrindra satria tsy misy porous ary noho izany dia tsy misy bakteria.Ny borosy fanadiovana dia mety ho madio kokoa noho ny servieta na tanana, saingy tokony ho azonao antoka fa manadio azy tsy tapaka ianao.Ny ankamaroan'ny manam-pahaizana dia manoro hevitra ny fanadiovana ny volo amin'ny savony sy ny rano mafana aorian'ny fampiasana tsirairay, ary avy eo manadio azy ireo indray mandeha isan-kerinandro amin'ny alikaola.
Inona no mety ho fitaovana amin'ny tarehy ultrasonic?
Ny fitaovana amin'ny tarehy ultrasonic dia mampiasa vibration ultrasonic mba hanaterana vokatra fikarakarana hoditra kalitaon'ny salon.Ireo fitaovana tsy misy invasive ireo dia ampiasaina.
Mamporisika ny fikorianan'ny rà ao ambanin'ny hoditra mba hanatsarana ny fikorianan'ny rà
Teknôlôjia fanalana hoditra maty mba hanomezana hazavana voajanahary ny hoditra
Esory ny menaka be loatra amin'ny hoditra amin'ny alàlan'ny fikorianan'ny ion positive
Atsofohy lalina kokoa amin'ny hoditra ny moisturizers sy ny fitsaboana amin'ny hoditra
Manadio ny mason-koditra tsentsina ary manala ny mainty
Inona no fitaovana ultrasonic tarehy tsara indrindra ho an'ny hoditra manana olana?
Amin'ny ankapobeny, miankina amin'ny haavon'ny fikarakarana ilain'ny hoditrao izany.Na dia mbola tanora aza ianao ary tsy dia sahiran-tsaina amin'ny famantarana ny hoditra efa antitra, toy ny tady na kitapo eo ambanin'ny maso, dia mety mbola tsy ho vitanao ny manala ny tasy sy ny tasy.Ny fanadiovana ultrasonic izay tsy tantera-drano ary natao ho an'ny fampiasana isan'andro dia mety ho vahaolana tonga lafatra amin'ny olanao.
Ny vibration ultrasonic-ny dia natao hidirana lalina any amin'ny hoditry ny hoditra - izay anombohan'ny olana - ary manala loto, sela maty ary menaka mety hiteraka olana.Ny volo malefaka dia manome fanorana malefaka izay manome ny fanentanana rehetra ilaina mba hitazonana ny hoditrao ho salama.
Inona no fitaovana ultrasonic tarehy tsara indrindra ho an'ny hoditra efa antitra?
Rehefa matotra ianao dia miova ny zavatra ilainao - ary toy izany koa ny filan'ny hoditrao.Mety ho lasa ady tsy tapaka amin'ny tsipika madinidinika sy maso mivonto izy io, ary ny hoditrao dia mety manomboka mampiseho famantarana hafa amin'ny fahanterana, toy ny fihenan-tsofina kely manodidina ny saokany.Na izany aza, ny mahasorena anao dia mety mbola manana olana amin'ny mony ianao noho ny menaka be loatra sy ny faritra maina amin'ny tavanao.
Ny Faicial Skin Scubber dia mety ho ampahany manan-danja amin'ny fikarakarana hoditrao.Ny "exfoliate" azy dia toy ny exfoliator malefaka, manala ny selan'ny hoditra maty sy ny tasy misy olana, fa ny fomba ionic kosa dia manampy ny hoditrao handray mora foana ny toner sy moisturizer ampiasainao isan'andro.
Manana borosy makiazy manokana tadiavinao ve ianao?Jereo eto ambany ny torolàlana momba ny borosy makiazy mba hahazoana ny fampahalalana ilainao
1. Borosy vovoka
Torolàlana amin'ny borosy vovoka
Ny borosy vovoka dia matetika borosy matevina feno fibre - synthetic na voajanahary - miaraka amin'ny fahaiza-manao isan-karazany amin'ny asa hatsarana.Ity borosy makiazy eny rehetra eny (izay zara raha mahita kitapo fanaovana makiazy) dia fitaovana tena ilaina amin'ny arsenal makiazy anao.
Mba hampiasana ny borosy ho fototra dia atsobohy ao anaty vovobony ny borosy (ho an'ny vovoka sy vovoka) ary ahodino na fafao mandra-pahavitan'ny fandrakofanao.Soso-kevitra: Mora kokoa ny miantoka fandrakofana feno raha manomboka eo afovoan'ny tavanao ianao ary mandroso tsikelikely.
Ity dia fitaovana maro ho an'ny vao manomboka, indrindra mety ho borosy fototra mineraly satria mora mifangaro sy ampiasaina amin'ny vokatrao.
Amin'ireo karazana borosy makiazy rehetra, ny borosy vovoka dia tonga lafatra amin'ny fampidirana loko rehefa maniry vokatra voajanahary kokoa, tsy misy loko, toy ny mena.Eritrereto ny takolaka mavokely fa tsy ny fijery mihetsiketsika sy maizina.
2. borosy fototra
Fondation Brush Guide
Ny borosy fototra miorim-paka dia matetika fisaka, miaraka amin'ny endrika tsy dia feno ary manify kokoa.Ireo borosy ireo dia mety indrindra ho an'ny fototra sy vokatra hafa.Raha manana olana amin'ny fanapahan-kevitra momba ny karazana fototra ianao dia fantaro bebe kokoa momba ireo karazana fototra ETO.Raha hampiasaina dia atsobohy amin'ny rano mafana aloha ilay borosy ary potehina moramora ny mihoatra.Raha mafana ny andro ary mazàna tsemboka ianao dia ampiasao rano mangatsiaka mba hahazoana traikefa amin'ny fampiharana mamelombelona kokoa.
Ny rano dia manana tanjona roa eto: hiantohana ny palitao fototra mirindra, ary hisoroka ny borosy tsy handrakotra fototra rehetra - mitahiry vola anao satria ny borosy dia tsy mandray makiazy.Tandremo anefa ny manindry moramora izay mety ho rano be loatra ao anaty lamba famaohana mba hanesorana azy.Ny rano be loatra dia mety hanalefaka ny makiazy ary tsy mahomby ny fandrakofana ny vokatra.
Inona no tombony azo amin'ny borosy fototra elektrika?
1. 2 hafainganam-pandeha azo fidina, mety amin'ny karazana hoditra samihafa
2. Anti-bakteria borosy fitaovana, hoditra-namana
3. Endriky ny borosy tsy manam-paharoa, mahatonga anao hamita ny makiazy ao anatin'ny segondra
Ahoana no hitazonana ny hoditrao ho hydrated?
Ny hoditra maina dia manana endrika manify sy marefo, toa hita mibaribary fa tsy misy rano, tsy misy rano, ary mihetsiketsika, ary aorian'ny fanadiovana dia mihamitombo izy io.Matetika ny hoditra saro-pady sy maina amin'ny ankapobeny dia maneho trangan-javatra fahanterana aloha loatra: tsy mahagaga raha maro kokoa ny ketrona hita matetika amin'ny hoditra maina noho ny amin'ny hoditra misy menaka.
Ny saron-tava hyper-nourishing dia afaka manampy amin'ny fanomezana ny epiderme ny fatra tsara amin'ny hydration miaraka amin'ireo toetra ireo.Tsara raha asiana saron-tava amin'ny fomba fanao amin'ny hatsaran-tarehy, fara fahakeliny, indray mandeha isan-kerinandro izay ahafahanao manadio sy manamaivana, manatsara ny vokatry ny crème.
Inona no atao hoe Blackheads ary inona no mahatonga azy ireo?
Ny blackheads dia antsoina koa hoe comedones.Mipoitra eo amin'ny hodi-tava ireo fivontosana maizimaizina ireo rehefa mihodinkodina ny fotsifotsy.Misy mason-koditra manerana ny tarehintsika, ary misy volo iray sy fihary menaka iray ny mason-koditra tsirairay.Ny glanda mpamokatra menaka dia fantatra amin'ny anarana hoe glanda sebaceous.Na dia misy dikany ratsy aza ny sebum, dia manampy amin'ny fanadiovana sy fiarovana ny hoditra.Na izany aza, raha mamokatra menaka be loatra na vitsy kokoa ireo fihary ireo dia mety hisy fiantraikany amin'ny hoditrao izany.Raha hoditra maina ianao, dia tsy mamokatra sebum ampy ny fihary menakao mba hitazonana ny hoditra ho salama sy mando.Amin'ny lafiny iray, raha be menaka loatra ny hoditrao, dia mamokatra sebum be loatra ny glandinao.Rehefa mamokatra sebum be loatra ny hoditrao, ary miaraka amin'ny selan'ny hoditra maty, dia mety hibahana ny mason-koditra ka mahatonga ny fiposahan'ny mainty.Indrisy anefa, ny mason-koditra tsentsina dia toerana tsara ho an'ny bakteria hiezahan'izy ireo hitarika aretina manaintaina amin'ny endriky ny mony sy ny tasy.
Ny antony hafa mety hanaratsy sy hahatonga ny fisehon'ny blackheads dia ny tsy fifandanjan'ny hormonina, ny tsy fahampian-tsakafo, ny adin-tsaina, ny loto, ny hatsembohana, sns.
Inona no asan'ny microcrystalline blackhead remover?
Microcrystalline blackhead remover milina fanadiovana, izay fitaovana hatsarana amin'ny asa maro, toy ny Dermabrasion, compact, pores madio, akne manala sy blackhead suction.Fampiasana mihoatra ny 100,000 micro-crystal fandavahana poti amin'ny banga suction mba hanafoanana ny ivelany sosona ny fahanterana hoditra sy ny mason'ny loto, mba ho madio kokoa ny mason-tsivana, ary ny hoditrao ho malama, fotsy sy malefaka.Izy io dia teknolojia tsy misy invasive sy tsy mahasosotra izay afaka mifehy ny haavon'ny dermabrasion amin'ny alàlan'ny bara mitsimpona amin'ny hamafin'ny diamondra.Mandritra izany fotoana izany, ny 4 samy hafa endrika probes manana asa samy hafa, toy ny microdermabrasion, manadio ny masonkoditra sy ny sisa.
Ahoana no fiasan'ny microcrystalline Blackhead remover?
Vacuum fanerena karazana misintona endrika V endrika teknolojia
1. Miaraka amin'ny rafitra vacuum suction, dia afaka misintona sy manotra ny hoditrao, mampiroborobo ny ra sy ny lymph mivezivezy, mampiroborobo ny metabolism, ka ny hoditra sela mba hahazo ampy sakafo fanampin-tsakafo, ka ny hoditra lasa mihenjana sy malama.
2. Ampitomboy ny permeability ny hoditra, ka ny hatsaran-tarehy vahaolana dia mety ho lalina kokoa ao amin'ny hoditra sela, amin'izany dia manatsara ny hamandoana ny hoditra, hahatonga ny hoditra hamiratra kokoa.
3. Mampiroborobo fibroblasts fibre collagen hamokatra fibre collagen, hampitombo ny fahaiza-manaon'ny fiarovan-tena, hisorohana ny fahasimban'ny radika maimaim-poana amin'ny hoditra, mitazona ny fihenjanana sy ny elasticité ny hoditra.
4. Mampiroborobo ny fahaterahana indray ny selan'ny hoditra ary manatsara ny hery fiarovan'ny hoditra sy ny fiarovana ny taratra UV, ny rotsak'orana melanine amin'ny tava mba hitazonana ny hoditra maivana, ho salama kokoa ny hoditra.
5. Manatsara ny hoditra microcirculation, mampiroborobo ny melanine metabolism, amin'izay dia manalefaka ny hoditra pigmentation toerana amin'ny melanine
Inona no atao hoe loha microcrystal manala blackhead?
Microcrystalline probe amin'ny mineraly voajanahary microcrystalline drill poti, dia afaka moramora manala ny cuticle, dia ny hoditrao ho lasa malefaka sy fanavaozana fijery, dia hanosika moramora ny maloto ambonin'ny potipoti-javatra, raha ny adsorption asa, afaka hoditra amin'ny loto notsentsitra, ary avy eo manala ny hoditra sela raha mampiroborobo ny fikorianan'ny ra, dia mahasoa ny voajanahary fanavaozana ny sela mba hihazonana ny hoditra malama, fanavaozana tanora luster
Ny antony hafa mety hanaratsy sy hampiroborobo ny fisehon'ny blackheads dia ny tsy fifandanjan'ny hormonina, ny tsy fahampian-tsakafo, ny adin-tsaina, ny loto, ny hatsembohana, sns.
Aiza no fahita matetika ny Blackheads?
Ny mainty hoditra dia matetika miseho amin'ny tarehy satria ao aminy no be indrindra amin'ny fihary menaka.Amin'ny ankapobeny, ny faritra t (faritra handrina sy orona) dia mora voan'ny blackheads satria ny fihary ao amin'ireo faritra ireo dia matetika mamokatra sebum.Ny tratra sy ny lamosina koa dia matetika voan'ny blackheads.Ny tena mahaliana dia ny felatanana sy ny faladiany ihany no tsy misy fihary menaka.
Inona no fomba mety amin'ny fampiasana ny fanalana vacuum blackhead?
Mijery ablackhead vacuum removerao am-piasana amin'ny alalan'ny YouTube dia zavatra iray — raha ny marina, ny fampiasana iray amin'ny fomba marina dia lalao baolina hafa tanteraka.Tsarovy fa ny fampiasana tsy ara-dalàna dia mety hitarika ho amin'ny areti-maso, mangana maivana, na kapila vaky mihitsy aza (ary mazava ho azy fa tsy misy maniry izany).
Manoro hevitra ny Draftman ny fampiasanablackhead vacuum removersamin'ny hoditra madio sy maina, ary mandehana ilay fitaovana manomboka eo afovoan'ny tavanao mivoaka amin'ny kapoka fohy sy tokana."Ny fanalahidy dia ny mihetsika tsy tapaka," hoy izy, nanazava fa tsy tianao ny hamela ny banga hijanona ao amin'ny faritra tokana mandritra ny fotoana maharitra."Ny fanerena be loatra amin'ny faritra iray dia mety hiteraka ratra amin'ny hoditra."
Inona no atao hoe scrubber hoditra ultrasonic?
Matetika fantatra amin'ny anarana hoe scraper hoditra, ny scrubber ho an'ny hoditra ultrasonic dia fitaovana iray mampiasa matetika avo mba hanangonana loto sy menaka avy amin'ny mason-koditrao.
Raha heverinao fa mampiasa vibration hanadiovana ny hoditra ny scrubber hoditra ultrasonic dia marina ny anao.Na izany aza, fa tsy endrika fingotra, ireo scrubber ireo dia vita amin'ny metaly ary mampiasa vibration avo lenta amin'ny alàlan'ny onjam-peo mba hanovana ny hoditra avy amin'ny sela iray mankany amin'ny iray hafa.Ireny mpikiky hoditra ultrasonic ireny dia manala moramora ny hoditra ary manangona izay rava.
Inona no soa azo avy amin'ny scrubbe hoditra ultrasonic?
Fanadiovana lalina ny hoditra
Mampihena ny pores
Manatsara ny firafitry ny hoditra sy ny tonony
Mora kokoa noho ny endrika exfoliation hafa
Ny scrubbers ho an'ny hoditra amin'ny ultrasonic ihany koa dia manala ho an'ny famirapiratana mamirapiratra, ary mampiroborobo ny fitomboan'ny collagène vaovao izy ireo mba hamenoana tsipika tsara, ka mahatonga ny hoditra ho feno, mamiratra ary mamiratra kokoa.
Ny scrubber hoditra ultrasonic tsara indrindra dia tonga amin'ny toe-javatra isan-karazany mba ahafahan'ny mpampiasa mampihatra teknika fikarakarana hoditra amin'ny fiarovana sy ny fiainana manokana ao an-tranony.
Afaka mampiasa borosy fanadiovana tarehy ve aho raha misy mony amin'ny tarehiko?
Tsy azo ampiasaina fotsiny izy io, fa afaka manampy anao hanadio ny akne koa.Ny borosy dia misy fiantraikany amin'ny fanadiovana lalina ny pores.Afaka manala bakteria, vovoka, loto, menaka ao anaty mason-koditra, ary afaka manadio tsara kokoa ny hoditra.
Raha mampiasa menaka hitsaboana mony ianao, dia tsy misy loto eo amin'ny hoditra, ary hitroka tsara kokoa ny menaka.Rehefa mifidy borosy dia mifidiana borosy misy volo malefaka sy lava kokoa mba tsy handratra ny hoditra.
Na dia afaka mampiasa borosy fanadiovana tarehy aza ianao dia tsy azo ampiasaina isan'andro.Tsy azo ampiasaina mihoatra ny in-1-2 isan-kerinandro.Alohan'ny hampiasanao azy dia tsy maintsy diovinao ny lohan'ny borosy raha tsy izany dia handeha amin'ny tavanao ny bakteria.
Saingy tsy ny mony rehetra no afaka mampiasa borosy fanadiovana tarehy, raha toa ka tonga amin'ny antonony ka hatramin'ny mafy ny akne, dia tsy azonao ampiasaina izany.
Misy fatiantoka ve ny borosy fanadiovana tarehy?
Eny ny valiny.
Ohatra, tsy afaka mampiasa izany ny ankizivavy manana psoriasis na eczema.Raha taratra masoandro ny tarehy ary misy hoditra tapaka dia tsy tokony hampiasaina.
Fanadiovana tarehy elektrika
Ho an'ireo manana hozatra saro-pady dia asaina mampiasa borosy fanadiovana tarehy indray mandeha na indroa isan-kerinandro.Rehefa mampiasa azy dia aza ampiasaina ela loatra, ary aza manindry mafy ny hoditra.Aza manahy loatra anefa ny amin’ireo anabavy kely manana hozatra saro-pady.Betsaka ny borosy fanadiovana tarehy azo ampiasaina amin'ny hozatra saro-pady.Ohatra, azo ampiasaina ho an'ny hozatra saro-pady ny borosy silicone miaro amin'ny bakteria.
Raha tsy mazava ny hoditrao dia afaka mandeha any amin'ny hopitaly ianao mba hitady dokotera hanampy anao hamantatra.
4 Floor, 3 Building, Pengtengda Industrial Park, No. 131, Huating Road, Dalang, Longhua Zone, Shenzhen, Guangdong, Sina
© Copyright 20142021: Zo rehetra voatokana.